Ufuna AmaZulu estikini umgadli weSuperSport ovuthayo kulezi zinsuku - Impempe
Ufuna AmaZulu estikini umgadli weSuperSport ovuthayo kulezi zinsuku
Umgadli weSuperSport United ovutha engabaselwe kulezi zinsuku, uBradley Grobler useveze ukuthi inhloso yabo wukuwina yonke imidlalo kodwa bayakuqonda ukuthi ngeke kwenzeke njengokufisa kwabo ngasosonke isikhathi. Yingakho nje lo mgadli oneminyaka engu-32 esheshe wakwamukela futhi wakudlulisa ukubanjwa kwabo yiMamelodi Sundowns ngo 0-0 ngempelasonto.
“Impela sifuna ukuwina yonke imidlalo kodwa uma ubhekene neqembu elifana neSundowns elibhekwe ekuthatheni isicoco seligi, ngicabanga ukuthi sizibambe zaqina, futhi iphuzu umhlomulo omuhle,” usho kanje uGrobler. Asikho ke nokho isikhathi sokuphumula kule sizini njengoba kuzothi ngoLwesithathu Amatsatsantsa a Pitori abuyele enkundleni eLucas Moripe Stadium eseyobhekana naMaZulu FC emdlalweni weDStv Premiership ngo 5 ntambama.
“AmaZulu ayiqembu elihle kakhulu, elinabadlalli abahle nomqeqeshi owenza kube mnandi ekhempini (uBenni McCarthy). Kuzoba wumdlalo onzima, kodwa vele imidlalo inzima yonke kule sizini.
“Njengamanje sisefomini enhle futhi siyakujabulela ukudlala njalo yize kunzima, kodwa njengabadlali into esiyifunayo wukudlala.
“Iqembu alizange likhathazeke ngokudlala njalo njengoba kwenzeka njengamanje. Kumele sincome umqeqeshi (uKaitano Tembo), ngicabanga ukuthi kulula ukudlala kodwa ukugada abadlali uqinisekise ukuthi abakhathali ngokweqile futhi bahlale bekungele ukudlala yinto enzima. Ngicabanga ukuthi usenza umsebenzi omuhle,” kuchaza lesi sibabuli somgadli.
Uthe ayikho imfihlo ekushayeni kwakhe amagoli sengathi ushunqiselwe ngenethi njengoba kwenzeka kule sizini kodwa wukwethembana nozakwabo okumsizayo. UGrobler useshaye amagoli alishumi emidlalweni engu-11.
“Angicabangi ukuthi kunemfihlo. Iqembu lingisize kakhulu, nomgadli esibamnisene naye (Thamsanqa) uGabuza usizile. Uma ungumgadli udinga iqembu elikwethembayo elizokweseka. Ngiyimi nje ngizijabulelela ukudlala nokuthi ngiphile ngiwumqemane. Nginozakwethu abangesekayo nomqeqeshi okholelwayo kimi, yingakho nje kunje,” kuchaza uGrobler.
Uthi Usuthu luzohlangana nezimbila zithutha njengoba lubafice ngesikhathi befuna ukunyukela kuligi.
” Asikho isikhathi sokuzilungiselela kahle ngoba sidlala ngezimpelasonto naphakathi neviki. Sithola isikhashana nje sokuthi sibuyele esimweni sokudlala kodwa ngicabanga ukuthi ngoba ngumsebenzi wethu lona esikhokhelwayo ngawo, kumele sisijwayele lesi simo. Sidlala kahle njengamanje, futhi sizimisele ukuqhubeka nalo mgqigqo. Sifuna ukuba sendaweni engcono kuligi. Sike sazihlinzela ezibini phambilini kodwa manje sifuna ukuqhubeka sizikhandle sakhele phezu kwesiqalo sethu esihle. Lokho sizokwenza ngokubhekana nomdlalo ngamunye, siqale ngalo waMaZulu.”
Previous Previous post: UTruter uthi akukajiki lutho ngabekelwe ukukuzuza kwiSwallows kule sizini
Next Next post: Iphinde yashelela iPirates ibanjwa yi-Arrows isekhaya